Wararka Maanta: Khamiis, Apr 1 , 2021-Dowladda federalka oo lagu eedeeyay in ay hor istaagtay in diyaarad ka degto deegaan xeebeedka Garacad
Wafdigaan ayaa dhowr cishe ah ku xanniban magaalada Garowe, kadib markii diyaaradihii qaadi lahaa ay diideen inay u kicitimaan magaalada Garacad.
Wararku waxay sheegayaan in shirkaddaha diyaaradahu sababo amni awgeed ay uga cudur daarteen in ay u duulaan Garacad, halkaas oo maalmo ka hor lagasoo sheegay in ay dhalinyaro hubaysan ay arbushaad ka sameeyeen garoonka diyaaradaha Garacad.
Maalgashadayaasha oo ay ku jiraan kuwa u dhashay Imaaraatka Carabta ayaa qorsheynayay in ay booqdaan dekeda Garacad laga dhisayo, inkastoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in saraakiil ka socda shirkadda DP world ay halkaas ku wajahnaayeen.
Masuuliyiinta Puntland ee eedaynta dusha uga tuuray dowladda federalka Soomaaliya waxay sheegeen in duuliyayasha diyaaradaha lagala soo hadlay Muqdisho, loona sheegay in aysan u duuli Karin Garacad.
Balse, Puntland weli si rasmi ah ugama hadlin arrintaan.
4/1/2021 2:10 PM EST